Izinto okumele uzenze On Long zemininingwane Ohambweni | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Izinto okumele uzenze On Long zemininingwane Ohambweni
(Kugcine ukubuyekezwa On: 25/03/2020)
A ngesitimela sicindezelwa ukuba ume, ngibuke ngefasitela futhi sazise okunethezeka kakhulu ngokungaziniki isikhathi sokufundisa yethu. Okuhambayo kuyajabulisa kodwa kwesinye isikhathi kungathatha kuze bonke amandla ethu, ngomkhumbi isitimela eside yithuba ukucisha bese sokuphumula. Yenza okuningi ku-uhambo lwakho - nazi izinto zethu phezulu ukwenza ku eside kulolu hambo isitimela ukuqinisekisa zonke isihambi ride okuphumuzayo futhi kujabulise.
Lalela umculo ngenkathi ethatha isikhathi eside isitimela Ohambweni
Gqokani headphones akho bese wehlisa ijubane kuyilapho ukulalela umculo wakho oyintandokazi. Ayikho indlela engcono njengokungathi sijabulela indawo enhle olunothile. Ukuphumula ubukele enhle rush esidlule lapho ulalela abaculi abayizintandokazi zakho.
Kunganjani ukuthuthukisa ikhono elisha ohambweni lwakho? Uma uhambela ezweni elikhuluma ulimi oluhlukile, uhambo isitimela eside linikeza ithuba sithathe amagama ambalwa nemishwana.
Kuyinto enhle ukwazi izinto eziyisisekelo yiluphi ulimi uma uvakashela kwelinye izwe. Ngenhlanhla, bangu zokusebenza eziningi nama-podcasts ungalanda ukuthi sipho izifundo kuhlanganise Spanish ethandwa, German, Italian, nezilimi English.
Ukufunda mkhulu okuphumuzayo futhi uhlale ngendlela emnandi kudlule isikhathi. Long namahora okusebenza kanye ehlale ematasa kungasho isikhathi sokufunda okuncane, ngakho uhambo olude isitimela limelela ithuba bagxumela ibhuku lakho noma eBook. Uma uzizwa lazy futhi ufuna umuntu ukuba enze ukufunda ngawe, yomsindo-ncwadi okunye okukhulu.
nge-laptops, iPads, kanye Smartphones onawo, kulula ukuthola ukuzijabulisa ugibelile. Ezamuva yakho ozithandayo ewuchungechunge yethelevishini noma ukubukela movie oye ukulangazelela ukubukela.
Kungakhathaliseki kukhona WiFi iyatholakala noma cha, kuwumqondo omuhle ukulanda iyiphi umbukiso noma ibhayisikobho ohlela uyibukele ngaphambi kohambo lwakho. Ezamuva ekuskrini izindaba zakho okuningi babemthanda futhi ngaphambi kokuthi wazi, uzoba lapho uya khona.
Kulula ukuzizwa ukhathele futhi evilaphayo phakathi nohambo olude isitimela. Ngemva ehlezi isitimela amahora, kubalulekile yokwelula izinyawo zakho uma kungenzeka. Ukuhamba omcane enkantini kuyokusiza ukuba usebenzise isikhathi futhi bazizwe agcwalisiwe. Hamba ngokusebenzisa namakalishi kuya enkantini, ukubheka landscape futhi ujabulele ezinye dessert nge isiphuzo ozikhethele
Ukuhlangabezana abantu ezintsha ku eside Ohambweni isitimela
Ukuhamba ngesitimela kungaba ukuxhumana kwabantu. Ukuhlangana nabantu abasha ezitimeleni kulula ukudlula ezinye izindlela ezokuthutha. Ngokungafani indiza, une inkululeko ukuhambahamba futhi bahlanganyele nabanye abavakashi. Kuyajabulisa lokho ongakufunda kwabanye abantu nezindaba zabo – ukukhuluma ngokuphila, ukusebenza bese ukhulisa inethiwekhi. Buza umuntu oseduze kwakho ngencwadi akufunde, ubaphe elimnandi noma umane ukuqala ingxoxo mayelana uya khona babelana uvakasha. It Kudlula izingxoxo une ngenkathi ukuhamba-Europe ngesitimela ukuthi kudala izinkumbulo ehlala njalo.
Lungiselela elilandelayo isitimela eside Ohambweni yakho
I eside isitimela kulolu hambo ngezinye izikhathi kuphela nezikhathi ezolile ngesikhathi sakho uhambo. Kungaba ithuba kumnandi ngawe ifake uphethiloli futhi ulungiselela ofuna ukuya kuyo oyikhethile. Isiphuzo amanzi amaningi, udle ukudla uma kungenzeka, ubuthongo. Ukusebenzisa uhambo lwakho eside isitimela ngokuhlakanipha kuzokusiza bazizwe beqabulekile futhi akukhuthalele - isilungele uya khona eduze.
Wenzani ngesikhathi eside uma zizohamba ibanga isitimela? Sazise nge tweeting nathi nganoma @SaveATrain! , Ungathola ezinye iziteshi zethu zomphakathi Saveatrain
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/things-long-train-journeys/ - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
longtrainjourneys Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Izikhangibavakashi